जनप्रतिनिधिलाई होच्याएर आनन्द लिने काम भएको छ (विद्यासुन्दर शाक्यसँगको भिडियाे अन्तरवार्ता)
आइतबार, २९ साउन, २०७४
विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रुपमा काम गर्न थालेको साढे दुई महिना भयो । तर, निर्वाचनको बेला उनले गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप काम हुन सकेन भनेर केहीले उनको आलोचना गरेका छन् । काठमाडौंलाई सुन्दर र जीवन्त शहर बनाउने प्रतिबद्धता लिएर मेयर बनेका शाक्यका प्राथमिकतामा के–के काम छन त ? नेपालीपत्रका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानी :
निर्वाचनको बेला प्रतिबद्धतापत्रमा तपाईले १०० दिनमा १०१ काम गर्नेछु भनेर सूची सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तपाई मेयर भएको दुई महिनाभन्दा बढी भयो । यसअवधिमा कतिवटा कामहरु सम्पन्न भए ?
त्यसमध्येका कतिपय कामहरु सम्पन्न भएका छन, केही कामहरु चालु अवस्थामा छन र केही कामहरु सुरु गर्ने अवस्थामा छौं । जति हामीले सोचेका जति सबै काम गर्नका लागि कानुनी र केही प्रक्रियागत अड्चनले समस्या पारेको छ । असारसम्मको बजेट र कार्यक्रम हामी भन्दा अगाडिकाले कर्मचारीले चलाएका थिए । त्यसमा हामीले गर्न सक्ने जति काम गरेका छौं । हामीले बोलेका कुराहरु साउनबाट नगरपरिषदले पास गरेपछि कार्यन्वयन सुरु हुन्छ । महानगरको नीति र कार्यक्रममा हामीले बोलेका सबैकुरालाई समेटेका छौं । अब त्यो कार्यन्वयनको चरण सुरु भएको छ ।
तत्काल सुरु हुन लागेका कामहरु के–के हुन भन्न मिल्छ ?
पुननिर्माणका केही काम सुरु भइसकेको छ । पुननिर्माणका काम तुरुन्त सकिने होइन, केही समय लाग्छ । काष्टमण्डप पुननिर्माणको जिम्मेवारी हामीले लिइसकेका छौं । यसको कानुनी प्रक्रिया लामो छ । पुरातत्व विभाग, पुननिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय समुदाय सबैको सहमतिमा त्यो काम गर्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वमा त्यो काम गर्छौ भनेका छौं । त्यसको लागि फाइनल ड्रइङ डिजाइनको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, अन्य पुननिमार्णको कामहरु धमाधम सुरु भइसकेका छन् । कतिपय सम्पदा निर्माणमा जग हाल्ने काम भइसकेको छ । भोली पनि यस्ता कामले निरन्तरता पाउँछन् ।
काष्ठमण्डप एउटा उदाहरण भयो त्यो बाहेक तत्काल सुरु भएका अरु कामहरु के–के हुन ?
काष्ठमण्डपकै पछाडि रहेको अशोक विनायक मन्दिर जिर्नोद्धारको काम सुरु भइसक्यो । १५ नम्बर वडामा रहेको बैरोचन तिर्थको पुननिमार्णको काम सुरु भइसक्यो । त्यस्तै मैत्रिपुरको भोली सुरु हुन्छ । यसरी क्रमिक रुपमा धेरै ठाँउमा पुननिमार्णको काम सुरु भएको छ र यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउँछौं । त्यसमा सबैभन्दा विवादित चाहिँ काष्ठमण्डप नै छ ।
के कारणले विवादित भयो ?
बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने कुरा सबैलाई थाहा थियो । २९ गते नै सम्झौता गरेर चौंथो पक्षलाई जिम्मेवारी दिने काम पुननिमार्ण प्राधिकरणले ग¥यो । त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग पनि त्यसमा साक्षी बसेका छन् । जुन हामीले चुनावबाट जितेपछि हामी बनाउछौं भनिरहेका थियौं । तर, अब हामीले बनाउन पाउनुपर्छ भन्दा स्थानीय बासिन्दाबाट अवरोध आउँछ । कतिपय कामहरु टेण्डर गर्न पठाउछौं भन्दा टेण्डर गर्न नदिने भन्ने कुरा आउँछ । आर्थिक ऐनले पनि नदिने र स्थानीयको सहयोग पनि नपाउने कारणले समस्या भइरहेको छ । स्थानीय अवरोध नहुने हो भने हनुमानढोका भित्र रहेका कतिपय मठमन्दिरहरु हामी जिर्णोद्धार गर्न चाहन्छौं । बजेट पनि हामी व्यवस्था गर्छौ । हामीले गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुप¥यो । एक करोड भन्दा बढीको छ भने टेण्डर नगरी काम गर्न सक्दैनौं । तर, स्थानीयको माग चाहीँ उनीहरुले नै गर्न पाउनुप¥यो भन्ने छ । त्यो गराउने संयन्त्र हामीसँग छैन् । पुननिमार्ण प्राधिकरण ऐन २०७२ अनुसार स्थानीय अभियन्ता भनेर जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मा हामीलाई दिइयो भने हामी सजिलै काम गर्छौं ।
मानिसको दैनिक जिविकासँग जोडिएको काडमाडौंका सडक, सवारी, ढल आदी व्यवस्थापनमा महानगर काम नै गर्न सकेन भनेर तपाईको आलोचना भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
अपेक्षा धेरै छन् । माया गर्नेहरु धेरै छन् । माया गर्नेहरुले आश गर्नु स्वभाविकै हो नि । आफुले जिताएको मान्छेसँग आशा राख्नु अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा लिनुहुन्न । उहाँहरुको गाली पनि माया नै त हो नि । माया नभएको मान्छेले गाली नै गर्दैन । बिग्रे बिग्रियोस भन्छन् । जसले माया गर्छन् उनीहरुले यसले छिटो काम गरोस भन्ने चाहन्छन् । त्यसकारण यसलाई नकरात्मक रुपमा भन्दा पनि सकरात्मक रुपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं । उहाँहरुको अपेक्षा अनुसार केही काम त भैसकेको छ । शहर सफा बनाउने क्रममा धेरै काम भएको छ । अहिले पनि ‘क्लिन द सिटी अभियान’ अन्तर्गत हामीले शहर धेरै सफा ग¥यौं । तर, हामी आउनभन्दा पहिलेसम्म कागजको टुक्राहरु टिप्ने काम भइरहेका थिए । अहिले हामीले कागज मात्रै होइन, सबै फोहोरहरु उठायौं र अहिले शहर सफा हुने क्रममा छ । अहिले वर्षातको समय भएकाले अन्यत्रको फोहोर पनि बगेर आइपुग्छ । अहिले महानगर भित्रको फोहोर सुर्योदय अगाडी उठाउने व्यवस्था गरेका छौं । महानगर भित्रको फोहोर हामीले मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र नहुने हो भने हामीले मात्रै गर्न पनि सक्दैनौं तर निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं । उहाँहरुले पनि सुर्योदय अघि फोहोर उठाइदिन पर्यो । त्यसपछि मात्रै हामीले जस पाउन सक्छौं । हाम्रो नीति महानगरका कर्मचारीले पालना गर्ने तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पालना नगर्ने हो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बिहान सुर्योदय अगाडी फोहोर उठाउन निजी क्षेत्रलाई भनिसकेका छौं ।
सडक सफा गर्न ‘म्यानुअल्ली’ गाह्रो हुने भएकाले हामीले ब्रुमर खरिद गर्ने भनेका थियौं । त्यसको लागि पाँचवटा ब्रुमर किन्नका लागि टेण्डर भैसकेको छ । तर, टेण्डर प्रक्रियामा आउनको लागि केही समय त लागि हाल्छ नि । त्यो पाँचवटा ब्रुमर आइसकेपछि हामी मूख्य–मूख्य शहर ब्रुमरले सफा गर्न सक्छौं ।
काठमाडौंमा ब्रुमर चलाउने सडक नै छैन् खाल्डै खाल्डा छन् । यस्तो सडकमा ब्रुमर कसरी चलाउने ?
हामी सधैं निराश भएर त हुँदैन नि ! हामी अहिले पुननिमार्णको क्रममा छौं । सायद मेलम्चीले नखनेको हो भने पनि त्यो समस्या हुँदैनथ्यो । आफ्नै घर बनाउन पनि दुई वर्ष लाग्छ, त्यस्तो बेलामा दुई वर्षसम्म त अर्काको डेरामा बसेर पनि चलाउन पर्छ नि । पानी ल्याउनकै लागि मेलम्चीले काम गरेको छ । त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । सडकमा खाल्डो पर्छ भनेर महानगरपालिकाले खन्न नदिने हो भने त पानी कहाँबाट ल्याउने ? पाइप विछ्याएर मेलम्चीले एक चरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । यहि १५ तारिखका पानीको प्रेसर जाँच गर्ने भनिएको छ । त्यो काम सकेपछि उहाँहरुले खनिएको सडक पिच गर्छौं भनेका छन् ।
अर्कोतर्फ, महानगरपालिकाको जिम्मामा रहेका सडक तुलनात्मक रुपमा ठिक छन् तर त्यसको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । महानगरपालिकाले केही काम गरेन भन्ने आलोचना भइरहेको छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । सुरुमा म आउन साथ हरेक वडामा २२/२२ लाख सडकको लागि पठाएको हो । त्यसमा पनि कतिपयले आलोचना गरे । काम गर्नको लागि त पैसा चाहिन्छ नि । अहिले पनि पहिलो चरणको पैसा निकासा गरिसकेका छौं । सानो वडालाई एक करोड पाँच लाख देखि ठूलो वडामादुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ चौमासिक निकासा पठाइसकेका छौं । उहाँहरुले अहिले ड्रइङ र इस्टिमेटको काम गरिरहनुभएको छ । वर्षातमा सडकको पीच नगर्ने भनेर रोकेका हौं । मिडियामा चाहीँ विद्यासुन्दरले बाटो पिच नगर्ने भन्यो भन्ने नेगेटिभ कुराहरु आउँछन् । वर्षातमा नगरौं दुई चार दिन पर्खौ, दुर्घटना हुने खालका खाल्डाखुल्डी चाहीँ थोरै पैसाले मर्मत गरौं भनेका हौ । वर्षातमा पिच गरेर पैसा किन खेर फाल्ने ? ३२ वटै वडामा पैसा गइसकेको छ अब राम्रोसँग काम हुन्छ । सबै ठाउँमा महानगरले खाल्डो बनाएको हो । तर, हामी त्यसको मर्मत गर्छौ ।
भिडियाेमा हेर्नुस अन्तरवार्ता
भत्काउनेहरुलाई समयमै सडक बनाउन लगाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले बहन गर्न सक्दैन र ?
कानुनी रुपमा त्यस्तो छैन् । दिउँसो आँउदा सडक ठिकठाक हुन्छ बेलुका आउँदा खनिसकेको हुन्छ । महानगरपालिकालाई त्यसको जानकारी पनि हुँदैन् । हामीले गृहमन्त्रीसँग पनि बैठक बसेर यस विषयमा कुरा गरेका थियौ । सबै भत्काउने निकायका मानिसहरु पनि हुनुहन्थ्यो । त्यसमा मैले एउटा प्रस्ताव राखेको थिए–अब स्थानीय सरकार आइसकेको छ । कानुन त हाम्रो मातहतमा हुन्न तर, समन्वयकारी भूमिका दिनुपर्छ भनेको थिए । त्यसमा हामीले समन्वय गर्ने भनेर निर्णय भएको छ तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन् ।
त्यसरी समन्वय नहुनुको कारण के हो ? के सरकारी निकायहरुले महानगरपालिकालाई टेर्दैनन् ?
सरकारी निकायहरु महानगरको मातहत हुँदैनन् । उनीहरुको विभागीय मन्त्रालय नै अलग–अलग छ । जस्तै, सडक विभाग एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत र विद्युत प्राधिकरण अर्कै मन्त्रालयमा पर्छ । नेपाल टेलिकम अर्कै मन्त्रालयमा पर्छ । त्यसैले पनि अप्ठ्यारो भएको होला । महानगरपालिकाले समन्वयकारी भूमिका मात्रै खेल्न सक्यौं भने धेरै प्रगति हुन्छ । अस्ती भर्खर मात्रै पनि एउटा बैठक बस्यो संसदीय विकास समितिको । त्यहाँ पनि त्यहि कुरा आयो । उहाँहरुले पनि ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागलाई महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसैअनुसार कसको जिम्मेवारी कति हुने भन्ने योजना बनिरहेको छ । अब त्यही अनुसार काम हुनेछ ।
महानगरपालिकामा तपाई आएर काम सुरु गरेदेखि अहिलेसम्मको स्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्दा महानगरपालिका प्रमुखले गर्न चाहेको कामलाई अवरोध गर्ने त्यस्ता अवरोधकहरु के–के रहेछन् ?
जानाजान कसैले एक प्रतिशत पनि कसैलाई अवरोध गरेको छैन् । जस्तो मेलम्चीको आफ्नै प्रक्रिया छ । हामीले केही ठाउँमा पिच गरिदिनुप¥यो भनेपछि केही ठाउँमा उहाँहरुले पिच गर्दिएको पनि हो । तर प्रेसर चेक हुने ठाँउमा त केही समय पर्खनै प¥यो । प्रेसर चेक नगरि पिच गर्दा पछि चुहियो भने त झनै समस्या हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा हामी आउन भन्दा पहिले र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ । सुधार भएको छ । यो दशैंसम्ममा केही सुधार देखिन्छ ।
हामीले मेलम्चीलाई दोस्रो चरणको काम गर्दा थोरै खन्दै पाइप बिच्छ्याउँदै पुर्दै जाउँ व्यवस्थित गरौं भनेका छौं । अब फेरि प्राधिकरणले पनि खन्ने भन्ने कुरा आएको छ । अहिले खनेको बनाएको छैन फेरि एडिबीको सहयोगमा खन्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर, उनीहरुलाई काम नगर भन्ने कुरा त आएन । धुलो धुवाँ खाल्डो रहित होस भन्ने हाम्रो चाहना हो तर जसले पनि आफ्नो काम राम्रोसँग नगर्दा दोष आउने त महानगरपालिकालाई नै हो । त्यसैले नैतिक रुपमा हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।
दशैंसम्ममा केही सुधार हुन्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो । त्यसबेलासम्म काठमाडौंका बासिन्दाहरुले अनुभुति गर्ने गरी के–के कुरामा सुधार भएको देख्न सक्छन ?
यातायात व्यवस्थापनमा अस्थायी रुपमै भए पनि केही व्यवस्थापन गर्छौैैं । सार्वजनिक सवारीले रोडलाई बस स्टप बनाउने होइन । आधा घन्टासम्म प्यासेन्जर कुर्ने काम बन्द गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई भनिसकेका छौं । पिक एण्ड ड्रप मात्रै गर्ने हो भने पनि धेरै सुधार हुन्छ । ट्राफिक नियमलाई कडाईको साथ लागु गर्न भनेका छौं । ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न नपर्ने गरी हामी आँफै पनि अनुशासित हुनपर्छ । गाडी, मोटरसाइकल चालकहरु अनुशासित भएर लेन अनुशासन पालना गनुप¥यो । बाहिर चर्चा धेरै छ मोनो रेल र मेट्रो रेलको । हामीले मोनो रेलको कैयौं प्रस्तावहरुमा छलफल गरिरहेका छौं । त्यस्तै स्मार्ट पार्किङ मलको बारेमा पनि अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यो दिर्घकालिन कुरा हो । तत्काललाई भने हामी जे छ त्यसैलाई उपयोग गर्न लागिपरेका छौं । त्यसको लागि मिटर ट्याक्सीलाई मिटर अनुसार गुडाउन भनेका छौं । तर, यसलाई लागु हामीले गर्न सक्दैनौं यसको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई भनेका छौं । सार्वजनिक यातायातको लागि हामीले सिटीबस चलाउन साझासँग सहकार्य गरिसकेका छौं । सार्वजनिक सवारीसाधनलाई छुट्टै लेन दिने प्रस्ताव पनि हामीले गरेका छौं । निजी सवारीले भन्दा सार्वजनिक सवारीले धेरै मानिस बोक्ने भएकाले त्यसलाई छुट्टै लेन दिन सकियो भने धेरै सजिलो हुन्छ भनेर त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौं ।
मैले काठमाडौं महानगरपालिकाको मतदातालाई मात्रै हेरेर काम गरेर पुग्दैन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको जम्मा मतदाता त पौने तीन लाख छ तर, यहाँ बस्ने मानिस कति छन् कसैलाई थाहा नै छैन् । कसैले चालिस लाख भन्छन् कसैले पैतालिस लाख भन्छन् । दुई लाख ७५ हजार मात्रैको लागि व्यवस्थापन गर्ने हो भने त यहाँको सडक, यातायात, खानेपानी सबै पर्याप्त छन् । तर, मैले त यी दुईलाख ७५ हजारलाई मात्रै हेरेर काम गर्ने त होइन् ।
एउटा उदाहरण, भारतका पूर्व राष्ट्रपति नेपाल आउँदा काठमाडौं यति सफा भयो कि धुलो छैन फोहोर छैन सबै सफा छ । तर उहाँ फर्केको दुई तीन दिनपछि काठमाडौं फेरि उस्तै भयो । विदेशी राष्ट्रप्रमुख आउँदा त्यति राम्रोसँग काम गर्ने महानगरको संयन्त्रले अरु बेलामा किन काम गर्न सक्दैन ?
त्यो विशेष समय हो । कोही पनि राष्ट्रप्रमुख आउँदा हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि र उहाँहरुको सम्मान र आतिथ्यको लागि पनि विशेष रुपले सरसफाइ गर्नुपर्छ ।
सधैंँभरी त्यसरी काम गर्न सकिँदैन ?
हिजो आज हामीले अभियान चलाएका छौं । तर, सधैँभरी त त्यो स्थिती रहँदैन् । त्यसैले अहिले हामीले अभियानको स्वरुप फेर्ने कुरा गरिरहेका छौं । क्लिन द सिटी अभियान अन्तर्गत अहिले हामीले सडकमा फालिएका फोहोर उठाउने काम गरिरहेका छौं । अब हामी महानगरबासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं अब सडकमा फोहोर नफाल्नुहोस् । सिधै हामी गाडी पठाउँछौ गाडीमा फालिदिनुहोस् । आफ्नो घरअगाडी फोहोर छ भने आँफैले सफा गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले हामी आफै पनि केही जिम्मेवार हुनपर्छ त्यसको लागि हामीले अभियान चलाउन लागेका छौं । अहिलेसम्म हामीले क्लिन द सिटी मार्फत फोहोर कलेक्सन मात्रै ग¥यौ तर मेरो घर अगाडी फोहोर छ त्यो उठाउन आइज भनेर जिस्क्याउनको लागि फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति छ । महानगरपालिकाको कर्मचारीहरु फोहोर उठाउँदै छन् । उठाउन पो समय लाग्छ फाल्न त बेर लाग्दैन । अनि एक पोका फोहोर फालिदिएर फोटो खिचेर, हेर्नुस त मेयरले केही गरेन भनेर फेसबुकमा राख्ने र असफल बनाउने, असहयोग गर्ने वा मजाक गर्ने जस्तो पनि भैरहेको छ । मेयर, उपमेयर सबै वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, अभियन्ताहरु लागिरहेको बेलामा महानगरबासीहरु पनि जिम्मेवार हुन प¥यो नि । हामी सबै लागेर इमान्दार र सचेत बन्ने हो भने केही समयमै काठमाडौं सुन्दर बनाउन सकिन्छ ।
अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो । तपाईहरुको नयाँ बजेट र कार्यक्रम पनि बनेको छ । अब कामको गतिले रफ्तार लिन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ ?
अवश्य गति लिन्छ । कतिपयले चाहीँ तपाईहरु धेरै पारदर्शी हुनुभयो । जे निर्णय गर्नुभयो वेवसाइटमा राख्नुभयो त्यसलाई नकरात्मक प्रचार गरियो, नराख्नुहोस भनेर सुझाव पनि आयो । कुनै मिडियाले त मैले नै दिएको सूचनाबाट आफुअनुकुल लेखेका छन् । त्यो सूचना दिने त मै हो नि । उहाँले खोजेर पाएको त होइन् । जे निर्णय गरे पनि वेभसाइटमा राखेको छु । ठिक भए पनि बेठिक भएपनि निर्णय त दिएको छु नि । जस्तै मैले नीति कार्यक्रम र बजेट पनि वेवसाइटमा राखेको छु कसैलाई चाहियो भने त्यहाँ हेर्न सक्छन् । पारदर्शी भएपछि मलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भनेर मैले नै दिएको सूचनाबाट भ्रमित पार्नेहरु पनि छन् । मिडियामा यस्तो आउनु स्वभाविक पनि हो यसलाई अन्यथा लिन पनि हुन्न । जे आइरहेको छ प्रतिक्रिया आइरहेको छ मैले त्यसलाई अन्यथा लिएको छैन् ।
काठमाडौंको सडकको दुरावस्था हुँदा हुँदै पनि मेयरले डेढ करोडको गाडी चढे भनेर तपाईको आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख भएपछि महङ्गै गाडी चढ्नुपर्ने रहेछ ?
सायद अहिलेसम्म कसैले पनि लेखेन, मैले अहिले चढिरहेको गाडीको कति पर्छ भनेर । कसैलाई पनि थाहा छैन् होला । कसैले पनि सोधेको छैन् । सायद गाडी नचढ्ने मेयर उपमेयर कोही पनि छैन् । अहिले मैले चढिरहेको गाडीको मुल्य कति हो मैले सोधेको छैन । अहिले गाडी ल्याइएको छ जसको प्रक्रिया गत चैतमा सुरु भएको थियो । निर्वाचन बैशाख ३१ गते भएको हो, महानगरपालिका मात्रै होइन सबै नगरपालिकाले त्यो प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । किनभने चुनाव हुँदैछ त्यसपछि मेयर उपमेयर आउँदैछन् उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्नपर्छ भनेर कार्यालयलाई लाग्नु स्वभाविकै हो । प्रक्रिया पुरा भएर गाडी आइपुग्दा हामी निर्वाचित भएर आएका छौं । अहिलेसम्म मैले त्यो नयाँ गाडी चढेको छैन् । तर, गाडी आइसकेको छ । त्यसको मुल्य के हो मलाई सोध्नुपर्दैन । त्यो सबै खरिद इकाइमा गएर सोधे थाहा भइहाल्छ । वास्तविक तथ्य यो हो । तर, मैले किन्न लगाए भनेर भ्रम छर्ने काम भयो । मेयरले, उपमेयरले गाडी चढ्नु ठूलो कुरा होइन् । यहाँका कार्यकारी अधिकृतले गाडी चढ्छन् । यहाँका विभागिय प्रमुखले गाडी चढ्छन् त्यो ठूलो कुरा होइन् । तर यहाँ जनप्रतिनिधीलाई होच्याएर आनन्द लिने काम भएको छ । तर, जनप्रतिनिधीलाई होच्याएर कसैको पनि अभिष्ट पुरा हुँदैन् ।
काठमाडौंको सडक, पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने छ । अलिकति सुधार नगरी म यस्ता महङ्गा गाडी चढ्दिन भनेर यहाँले पनि अलि सदाशयता राखिदिनुभएको भए हुन्थ्यो भनिएको होला नि त ?
म तपाई मार्फता सिंगो महानगरबासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले पनि कहाँ–कहाँ के–के गर्नु छ त्यो हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । स्थानीय चुनावबाट जितेर आएका वडाअध्यक्षहरु सबै विज्ञ छन् । म आँफै पनि उहाँहरुसँग सल्लाह गर्छु । एक किसिमले भन्ने हो भने वडाको हरेक समस्याको बारेमा उहाँहरु जानकार हुनुहुन्छ । केही काम त भइसकेको छ नि । कँही हुन बाँकी छ भने हामीलाई भन्नुस । तर, हाम्रो जिम्मेवारीमा नभएको कामलाई हामीलाई भनेर त हुँदैन् । जस्तो कतिपय मुख्य सडकको हामीले खनेकै होइन् । त्यो बनाउने हाम्रो दायित्व नै होइन् । कतियपय ठाँउमा हाम्रो दायित्व नभए पनि हामीले काम गरेका छौं । सडक विभागले गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै निकायले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौं । जस्तो जेब्रा क्रसिङ पेन्टिङ गर्ने काम त हाम्रो होइन । तर तत्काललाई त्यो पनि हामीले ग¥यौ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो हो र ? तर, त्यो पनि हामीले हेर्दैछौ । अरुले खनेको ठाँउमा पनि हामीले बाटो बनाएका छौं । तर, त्यसको सम्बन्धित निकायले दोहोरो भुक्तानी नलिइ व्यवस्थापन गरोस । एकै कामको लागि महानगरपालिकाले पनि भुक्तानी दिने अन्य निकायले पनि भुक्तानी दिने त्यस्तो नहोस् । त्यस्तो सूचना छ भने मिडिया र स्थानीयबासीले हामीलाई सूचना दिनुहोस् ।
कानुनी र प्रक्रियागत कुरालाई मात्रै देखाएर पन्छिने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरु अलि सिर्जनशिल भएर काम गर्न सकिदैन र ?
तपाईले हाम्रो अहिलेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुहोस् । त्यसमा राम्रा कुराहरु धेरै छन् । त्यो कार्यन्वयन नभइ त विश्वास हुँदैन् ।
त्यसमा के–के कुराहरु छन्, बुँदागत रुपमा भन्दिनुस न ?
अहिले सडकको पूर्वाधारको लागि चाहिने यान्त्रिक साधनमा मात्रै हामीले झण्डै २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । ब्रुमर, एक्साभेटर लगायतका विभिन्न उपकरणहरु किन्दैछौं । हिजो भर्खर पनि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आयो त्यसको लागि जाँदा मैले संसदिय समिति, सिंहदरबारको बैठकमा जान सकिन । आलोचना त्यहाँ त हुन्छ स्वभाविकै हो तर मेरो प्राथमिकता सिसडोल खुल्नपर्छ भन्ने हो । सिसडोल बन्द भयो भने महानगरपालिकामा मात्रै फोहोर थुप्रिँदैन । सिंगो उपत्यकाको फोहोर थुप्रिन्छ । त्यहाँका मानिसहरुको माग पनि नाजायज त होइन । काठमाडौंभरिको फोहोर यहाँ ल्याइन्छ तर उनीहरुको चाहीँ हिड्ने बाटो पनि छैन् । यस्ता कुराहरु यस्ता योजनामा समेटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाता र बासिन्दालाई केही अनुरोध छ भने भनिदिनुस् ।
जसरी उहाँहरुले मलाई अत्याधिक मतको साथ माया गरेर मलाई जिताउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद । अब तपाईहरुले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक सुन्दर, समृद्ध र जिवन्त शहर बनाउने हामी सबैको कल्पना हो । त्यसकारण हामीले मेयरलाई जिताइसकेका छौं सबै काम मेयरले गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि महानगरबासीभन्दा धेरै यहाँ त दैनिक काम काजको लागि काठमाडौं आएर बस्ने मानिसहरु हुनुहुन्छ । त्यसकारण म महानगरका स्थायी बासिन्दा र महानगरपालिकामा बस्ने अन्यत्रका सबै बासिन्दालाई यो भन्न चाहन्छु– महानगरपालिकाले जुन भिजन ल्याएको छ त्यसलाई सबैको साझा सपना मानेर सहयोग गर्नुभयो भने मात्रै काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ । यो विद्यासुन्दरको मात्रै सपना त होइन । त्यसैले जसरी उहाँहरुले चुनाव जिताउन सहयोग गर्नुभयो त्यसरी नै सफल बनाउन पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । तपाईहरुको यस सञ्चारमाध्यम नेपालीपत्र डटकम मार्फत उहाँहरुलाई आभार प्रकट गर्दै निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।